IPad Pro vaovao ao amin'ny WWDC miaraka amin'ny Face ID sy Borderless | Vaovao IPhone
IPad Pro vaovao ao amin'ny WWDC
Jun Zhang (Rosenblatt) dia nanambara izany afaka manana iPad Pro vaovao isika afaka volana vitsivitsy tamin'ny Fihaonamben'ny Mpampandrosoana Eran-tany izay hataon'i Apple ny herinandro voalohany amin'ny volana Jona ao San Jose.
Mety hanana ity iPad Pro vaovao ity sisiny manify ary hatao raha tsy misy Touch ID ary bokotra Home, izay hosoloina ny Face ID sy ny fihetsika asehon'ny iPhone X.
Hatramin'ny namoahana ny iPhone X, sy ny fiovana mahery vaika amin'ny endriny, dia efa nisy resaka momba ny dikan'ny "iPad X" Heveriko fa ilay fitaovana Ilay iray hararaotiko indrindra raha manana ID ID amiko dia Mac, fa ao aoriana fotsiny dia ny iPad. Ny fitazonana azy, matetika, amin'ny tanana roa, ny Face ID dia fomba iray ahazoana aina kokoa hanalana ny iPad.
Ny haben'ny honohono amin'ity iPad Pro vaovao ity dia roa, 10,5 sy 12,9 santimetatra, mamela 9,7 tokoa.
Na dia mahavariana aza ny iPad - hiresaka momba an'io "efijery rehetra" iPad io izahay,, Ny Face ID dia misy fetrany izay heveriko fa manohitra ny fampiasana omentsika ny iPad.
Ohatra, ny fianakaviana iray dia afaka mizara iPad iray mitovy ary mametraka ny rantsan-tànany amin'ny Touch ID. Tsy ho tanteraka izany amin'ny ID ID izay, amin'ny tenin'i Apple, dia manaiky endrika iray ihany satria tsy natao hampiasa olona marobe izany.
Azo atao izany fa ny Face ID dia mitondra vaovao amin'ity lafiny ity na, mihoatra ny Face ID mihitsy, iOS 12 dia mitondra vaovao sy ny mety andrasana efa ela ka hanana kaonty maromaro amin'ny iPad iray ihany. Fa raha tsaho ny iPad Pro dia nofy izany.
Ny tsaho dia nitsambikina niaraka tamin'ilay tsaho efa fantatry ny maodely HomePod hafa izay manamafy, ary miaraka amin'ny tsaho vaovao momba ny mety ho iPhone X mena, toy ny tamin'ny androny dia nitafy ny iPhone 7.
Soa ihany, tsy dia manana ambiny firy isika mahita ny Keynote WWDC voalohany ary hamafana ny tsaho. Ary koa, mbola misy fotoana Keynote tamin'ny volana martsa, na dia iPad aza ny vokatra tsaho momba ity tranga ity.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPad » IPad Pro vaovao ao amin'ny WWDC
Ny rindranasa Apple Music ho an'ny Android dia mahazo fanatsarana ao amin'ilay faritra video
Halide, ny fampiharana sary malaza dia havaozina amin'ny endrika vaovao maro